Iharan’ny Fandrahonana Ny Tambajotra Finday Voalohany Ho An’ny Vondrom-piarahamonina Tompotany Ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Jacobo Nájera, Giovanna Salazar Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, Liva Andriamanantena
Voadika ny 29 Janoary 2018 15:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, English, English, Español
Saripika avy amin'ny kaonty Facebook ho an'ny daholobe Redes, AC, fikambanana iray ao anatin'ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonin'ny Tompotany, AC. Nampiasaina miaraka amin'ny fahazoan-dàlana.
Mety voatery hikatona ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonin'ny Tompotany, fikambanan'ny vondrom-piarahamonina voalohany sy tokana sady mpanome tolotra mora kokoa ho an'ny finday sy ny tolotra aterineto ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Meksika, taorian'ny fangatahan'ny mpandrindra ny fifandaisandavitra nasionaly tamin'ny tambajotra mba handoa ny vola mitentina iray tapitrisa pesos (mihoatra ny 50 000 dolara amerikana) ho an'ny maridrefy izay ampiasain'ny onjam-peony.
Tamin'ny volana Jolay 2016, araka ny notaterin'ny Global Voices teo aloha, nanome fahazoan-dàlana voalohany ho an'ny tambajotran'ny fifandraisandavitra ho an'ny vondrom-piarahamonina tompotany ny Ivontoeran'ny Fifandraisandavitra Federaly ao Meksika (IFT) mba hiasan'ity fikambanana tsy mitady tombontsoa ity eo amin'ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonin'ny Tompotany.
Nanome fahafaha-miditra amin'ny tambajotra finday mora kokoa noho ny teo aloha ho an'ity vondrom-piarahamonina voahilikilika ara-toekarena ity rafitra tsy mitady tombontsoa tantanan'ny vondrom-piarahamonina ity. Midika ny fitantanana ny tambajotra eo an-toerana fa afaka nampiasa izany araka izay tiany ny olona toy izay hampiasa ny an'ny orinasa lehibe.
Nanome tolotra finday GSM (2G) ny tetikasa tamin'ny voalohany ho an'ny vondrom-piarahamonina mitoka-monina manodidina ny 20 tany amin'ny faritra atsimon'ny fanjakana Oaxaca tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana fanandramana. Niaraka tamin'ny fanapahan-kevitry ny IFT, nomena alalana hanome tolotra feo sy lahatahiry ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany, mba hiasa mandritra ny 15 taona , ary hanao fanitarana hatrany amin'ny fanjakan'ny Guerrero, Chiapas, Veracruz ary Puebla mihitsy aza.
Matetika mitaky ny mpanome tolotra mba handoa ny sarany amin'ny fampiasana maridrefy [maromaro] ny fifanarahana toy izany, saingy tamin'ity tranga ity, nitaky ny lalànan'ny amparo ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany izay nangataka ny fanafoanana ny fandoavam-bola. Nanao izany fangatahana izany izy ireo noho ny zava-misy fa tsy mitady tombontsoa ny asan'izy ireo ary tsy ampiasaina ara-barotra.
Nilaza tamin'ny gazety El Financiero i Erick Huerta , mpanolotsaina ara-pitsarana ho an'ny Tambajotram-pifandraisana Finday ho an'ny Tompotany ao amin'ny Faritra (izay ao anatin'ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany) fa ny iray amin'ireo olana lehibe atrehan'ireo mpanome tolotra tantanan'ny vondrom-piarahamonin'ny tompotany dia tsy misy ny fanavahan'ny lalàna ny fandoavam-bola an'ny mpanome tolotra ara-barotra sy ho an'ny vondrom-piarahamonina mpanome tolotra.
Nanazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny fifandraisandavitra ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny fifandraisandavitra ara-barotra ny Rhizomática, ilay fikambanana mahazo tombontsoa amin'ny iray amin'ireo fanohanana ara-bola avy amin'ny Rising Voices mba hametrahana ireo tambajotra ireo sady miandraikitra ny fanamorana ny fanorenana sy ny fikojakojana ny fotodrafitrasa ho an'ny tambajotram-pifandraisan-davitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany.
Iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra ny anjara andraikitra fototra entin'ny vondrom-piarahamonina. Miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny mpandraharaha ary mitady tombontsoa ny fifandraisandavitra ara-barotra. Ny fifandraisandavitra ho an'ny Vondrom-piarahamonina anefa dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Tsy mitady tombom-barotra izy ireo fa ny fifandraisana eo anivon'ny vondrom-piarahamonina, izay matetika any amin'ny faritra mitoka-monina, ary ny fikojakojana ny tambajotra kosa no tanjon'izy ireo.
Mamoaka ny tsy fitoviana ny tabilao eto ambany :
Loharanon-tsary: Rhizomática sy Redes AC, “Fampahafantarana hoa n'ny mpikambana vaovao.”
Ny Fifandraisandavitry Ny Vondrom-piarahamonina
Ny vondrom-piarahamonina no mitantana ny tambajotra ao an-toerana.
Ny vondrom-piarahamonina no mamaritra ny fomba itondrany ny tambajotra.
Ny vondrom-piarahamonina no mametraka ny sarany ho an'ny mpanjifany.
Tsy mitady tombontsoa izany.
Ampiasaina hanatsarana ny tambajotra ny fidiram-bola .
Ny vondrom-piarahamonina no mitantana ny fifanarahana miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina hafa izay ao anatin'ny fikambanana iray ihany koa.
Manao laharam-pahamehana ireo fampiasa izay manome tombontsoa bebe kokoa ho an'ireo mpanjifany ny vondrom-piarahamonina.
Ny Fifandraisandavitra Ara-barotra
Ny mpandraharaha ara-barotra no mitantana ny tambajotra.
Ny mpandraharaha ara-barotra no mamaritra ny endriky ny fomba ampiasana ny tambajotra.
Ny mpandraharaha ara-barotra no mametraka ny sarany tokony haloan'ny mpanjifa .
Mikatsaka ny tombontsoa betsaka indrindra araka izay azo atao mpandraharaha ara-barotra.
Ny fidiram-bola dia ampiasaina amin'ny fikojakojana ny tambajotra ary ho tombony ho an'ny tompon'ny orinasa.
Ny mpandraharaha no tompon'ny fifanarahana na mampanofa izany amin'ny mpandraharaha iray hafa.
Manao laharam-pahamehana ny fampiasa izay mampiditra vola bebe kokoa ny mpandraharaha.
Tsy natao hitadiavam-bola ny tambajotra ampiasain'ny vondrom-piarahamonina tompotany, ka tsy ho afaka handoa sarany lafo toy izany mihitsy. Manome tolotra finday, Simaiso ary lahatahiry ho an'ny tokantrano maherin'ny 3.000 any amin'ny faritra lavitra amin'ny sarany 40 pesos isam-bolana (2 dolara Amerikana isam-bolana) ny tambajotra. Ankoatra izay, amin'io 40 pesos io, mankany amin'ny vondrom-piarahamonina ny 25 pesos ary ho an'ny fikambanana (Ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany) ny 15 pesos, izay manokana izany vola izany ho amin'ny fikojakojana ny tambajotra.
Na izany aza, tamin'ny 15 Novambra 2017, araka ny notaterin'ny gazety El Financiero , nandà ny fangatahana fanafoanana ny fandoavam-bola ny Fitsarana ao amin'ny Distrika Faharoa misahana ny Olana Ara-pitantanana mikasika ny Fifaninanana Ara-toekarena , ny Haino Aman-jery ary ny Fifandraisandavitra.
Nanazava tamin'ny tranokalam-baovao tsy miankina Sin Embargo i Rodrigo Huerta Reyna, mpandrindra ny sampan-draharaha ara-pitsarana ao amin'ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany hoe:
Manana fahazoan-dalana fifanarahana ho an'ny vondrom-piarahamonina tompotany izahay amin'ny fampiasana ny maridrefy ho an'ny fampielezam-peo sasany. Nomena tamin'ny volana Septambra 2016 ny fahazoan-dalana, ary nandritra ny vaninttaona 2016 sy 2017 dia nampandoavin'izy ireo vola mitentina 900.000 pesos izahay, miampy ny zavatra hafa nandritra ny taona. […]
Manome tolotra ho an'ireo vondrom-piarahamonina izahay izay tsy ahazoanay tombony ara-bola ary tsy afaka handoavana velively izany vola izany, sady tsy mitady tombontsoa tahaka ny mpandraharaha ara-barotra izahay.
Eto amin'ny sary: ​​Ny famantarana mampahafantatra ny mpanjifa fa nahitsy ny teny milaza hoe tsy miasa ny sampan-draharaha. Ny hafatra voalohany dia mivaky hoe: “Tsy mbola misy ny antso ho an'ny toerana lavitra. Aza mafy loha”. Rehefa nanomboka niasa tao an-tanànakely ny tambajotra finday ho an'ny vondrom-piarahamonina, dia notsipihan'izy ireo ny teny sasany tamin'ny hafatra voalohany ka lasa nivaky toy izao: “Eny, misy ny antso ho an'ny toerana lavitra amin'izao fotoana”. Saripika nalaina tao Talea de Castro, ilay vondrom-piarahamonina voalohany nahazo tombontsoa tamin'ny tambajotra notantanan'ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany . Hita ao amin'ny kaonty Facebook Redes, AC ho an'ny daholobe.
Amin'izao fotoana izao, toherin'ny Fifandraisandavitry ny Vondrom-piarahamonina Tompotany ara-dalàna ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Fitsarana ao amin'ny Distrika Faharoa misahana ny Olana Ara-pitantanana, izay mikasika manokana momba ny Fifaninanana Ara-toekarena, ny Haino Aman-jery sy ny Fifandraisandavitra .
Nilaza tamin'ny tranokalam-baovao Sin Embargo i Huerta Reyna raha naneho hevitra momba ilay fanapaha-kevitra :
Mihevitra izahay fa manana ny tohan-kevitra ara-dalàna mba handresena ny lalànan'ny amparo ary mamela anay tsy ho voakasiky ny fandoavam-bola izany. Io no hany tolotra fifandraisandavitra tokana izay hananan'ny vondrom-piarahamonina, tsy taonga tany amin'izy ireo ny tambajotra ara-tantara, tsy nanana tolotra izy ireo, tsy nahatratra azy ireo ny tambajotra, mino izahay fa tokony ao anaty lalàna ny fanafoanana ny fandoavam-bola mazava tsara ho an'ity karazana mpandraharaha ity .
Efa ela no nanamafy ny mpandraharaha ara-barotra fa tsy ahazoan'izy ireo tombontsoa ara-barotra ireo vondrom-piarahamonina ireo. Nampiana-tena tamin'ny fampiasana ny teknolojia ireo vondrom-piarahamonina ireo noho izany nanomboka tamin'ny taona 2013 ary tsy mijery ny fitantanana ara-toekarena sy ara-pitsarana ny tolotra toy izany.
Manambara ny ady atrehina ankehitriny mikasika ny saram-pandehan'ny maridrefin'ny onjampeo fa zava-dehibe ho an'ny mpandrindra ny fifandraisandavitra ao amin'ny firenena ny fametrahana maodelim-pitantanana mifanaraka amin'ny zava-misy ao amin'ireo vondrom-piarahamonina tompotany Meksikana.